PressReader - Kwayedza: 2017-06-30 - Zvakakosha kuchengetedza goho
Zvakakosha kuchengetedza goho
NYANZVI dzezvekurima dzinoti zvakakosha kuti varimi vachengetedze goho ravo sezvo vachikwanisa kurasikirwa nechikamu che20 percent chegoho iri kana rikasachengetedzwa zvakanaka.
VaTirivangani Kova vanove deputy director kubazi rezvekurima nekuvandudzwa kwemichina yemadiridziro vanoti Hurumende yakazvipira kutsigira zvirongwa zvine chekuita nekuchengetedzwa kwegoho.
“Kune nzira dzakawanda dzinogona kushandiswa nevarimi kuti vachengetedze goho ravo dzakadai sekushandisa matura esimbi (metal silos), hermatic bags nekufirita goho nemishonga risati rapinda mumatura,” vanodaro.
VaKoza vanoti zvakakosha kuti goho richengetedzwe kuti nyika irwise nzara nehurombo.
“Kana goho rikachengetedzwa zvakanaka varimi vanoita mari nekuti rinotengeswa nemari yepamusoro sezvo rinenge risina kupfukutwa. Zvakare tinorwisa nzara nehurombo munyika medu nekuti kurima ibhizimusi rinomutsa mabasa mazhinji,” vanodaro.
Vanoti zvakakosha kuti varimi vatsvage ruzivo maringe nenzira dzekuchengetedza goho kuvarimisi vakatekeshera mumatunhu ese.
“Nyika iri kurasikirwa nechikamu che20- 30percent chegoho rechibage pagore nekuda kwezvipfukuto, makonzo uye kukundikana kuchengetedza goho kwakanaka. Zimbabwe iri kurasikirwawo nechibage icho chiri kuparadzwa kuburikidza nenzira dzakasiyana nekudaro zvakakosha kuti varimi vapihwe ruzivo rutsva uye rwuri nyore rwekuchengetedza goho, zvikuru sei mukurwisa chipfukuto chemhando yeLarger Grain Borer (LGB) zvakanyanya,” vanodaro. Kurasikirwa negoho kunorevei? Kune nzira dzakasiyana dzine chekuita nekurasikirwa negoho dzinosanganisira kurasikirwa naro riri muhuwandu hwakadai semakgs sekukudyiwa nezvipfukuto, twumbuyu, makonzo uye kubiwa.
Nzira yechipiri yekurasikirwa negoho ndeyekudzikira kwekunaka kwaro nekuda kwezvikonzero zvakadai sekurasikirwa nekudya kunovaka muviri uko kunofanira kuwanikwa kuri mariri, kudzikira kwemunhuwi kana kusanduka kweruvara zvichikonzerwa nekuwandisa kwezuva, mwando kana kukanganiswa kwembeu kuchizobuda goho rakaderera.
Zvii zvinokonzera kuderera kwegoho uye varimi vangazvikunda sei?
Kuminda, zvirimwa zvinogona kuparadzwa nemhuka dzesango dzakadai seshiri, makonzo, mujuru, moto wesango kana mvura yemudenga.
Kana iri nguva yekukohwa, murimi anogona kurasikirwa negoho nekuda kwekusabereka kunoita zvimwe zvirimwa nekuputika kwezvirimwa kana zvichinge zvanyanya kuibva zviri mumunda.
Pakutakura zvirimwa zvichienda kumba apo zvinenge zvichibviswa muminda, pane mikana mikuru yekurasikirwa negoho zvakare.
Kunze kwazvo, panguva yekuomesa zvirimwa zvinogona kudyiwa netupukanana, shiri, makonzo kana kuoma zvakapfurikidza.
Pakugaya nepakubika, murimi anogona kurasikirwa zvakare sezvo mushure mekudya chikafu chizhinji - icho varimi vanobuda dikita vachichirima - chinoraswa zvisina tsarukano.
Chikamu chipi chatiri kurasikirwa negoho senyika?
Chikamu chiri pakati pe15- 20 percent chechikafu chiri kurasika muZimbabwe nekuda kwenzira dziri pamusoro.
Zvipfukuto zvemhandoyi zviri kutambudza Zimbabwe?
Chipfukuto chemhando LGB chinoparadza goho zvakanyanya uye chinoparadza kunyangwe midziyo inogadzirwa nematanda mudzimba yakadai semacheya nemawadhiropu.
Dzimwe nhando dzezvipfukuto dzinosanganisira Maize Weevil neGrain Moth.
Varimi vanofanira kuziva kwavanokwanisa kutenga mishonga yechokwadi vachiwaniswa ruzivo maringe nemashandisirwo emishonga iyoyo.
Varimi vanofanira kutarisa mazuva anopera kushanda kwemishonga kuitira kuti vasazorasikirwe nemari apo vanotenga mishonga yakapera bas Ngavakwashewo ruzivo kuvarim vavo uye kuvatengesi vemishon vari muzvitoro.
Ndedzipi nzvimbo dzinonyan kutambudzwa nezvipfukuto uye ne vikonzero zvei?
Nzvimbo dzese dzinotambudzw nezvipfukuto nepamusaka peku goho rinofambiswa richiendesw kunzvimbo dzakasiyana asi ku mamwe matunhu anonyanya kutam budzwa nechipfukuto cheLarg Grain Borer kupinda mamwe.
Ndezvipi zvirimwa zvinogangan swa nezvipfukuto?
Zvirimwa zvakadai sechiba zvinotambudzwa nezvipfuku zvemhamdo yeLarger Grain Bor Grain Moth neMaize Weevil.
Bhinzi dzakaomeswa dzin gona kupfukutwa neBean Beat apo Cowpeas dzichikanganisw neCowpea Beatle.
Bazi rezvekurima nekuvand dzwa kwemadiridziro rinobatsi sei varimi?
Rinofundisa varimi nezvenzi dzekudzivirira zvipfukuto kub rikidza nepaterevhizheni, mum pepanhau neparedhiyo.
Rinoratidzira kushoo nekum sangano yeZimbabwe Trade Fa maringe neruzivo rutsva rwu kuburwa.
Bazi iri rinodzidzaisa zvaka varimi pamwe nevarimisi marin nekuchengetedzwa kwegoho.
Rinogadzirawo zvinyorwa zv kadai semaT- shirts nemabhuk anofundisa varimi machengeterw egoho. Parizvino varimi 200 vak dzidziswa kugadzira matura esim uye vamwe 120 kugadzira matu ezvidhina akanaka.
Chikamu che74 percent chevarim vechibage vari muZimbabwe varim vadiki uye goho ravo rinenge r rekudya nerekutengesa nokuda zvakakosha kuti ringe richiche getedzwa zvakasimba kubva kuzv pfukuto kana kusanduka kwemam riro ekunze.
Kushaikwa kwenzvimbo dzak naka dzekuchengetera goho, ruzi uye mamiriro ekunze anenge asi kumira zvakanaka zvinogona ku kuti varimi varasikirwe negoh nechikamu che20 percent.